အကောင်းဆုံး Hashtags ကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲ Martech Zone
Hashtags ကတည်းကကျနော်တို့နှင့်အတူရှိကြ၏ သူတို့ရဲ့ပစ်လွှတ် 8 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း တွစ်တာပေါ်မှာ။ ကျွန်တော်တစ် ဦး တီထွင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခု ကုဒ်တို ပလပ်အင်သည်တွစ်တာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာမှာ shortcode အတွင်း hashtags ထည့်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ရိုးရိုးလေးပြောရရင်လူအများအပြားကမျှဝေထားသော hashtags အပေါ်အခြေခံပြီးတွစ်တာကိုဆက်လက်ပြီးသုတေသနပြုသည်။ သော့ချက်စာလုံးများသည်ရှာဖွေရန်အလွန်အရေးကြီးသကဲ့သို့လူမှုရေးမီဒီယာရှိရှာဖွေမှုများအတွက် hashtags သည်အရေးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးပို့စ်များကိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် hashtag သုတေသန tools များစာရင်း ဝဘ်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်စျေးကွက်သမားတစ် ဦး ကသူတို့၏လူမှုမီဒီယာအသစ်၏မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး hashtag များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ထိုကိရိယာတစ်ခုအားမည်သို့အသုံးပြုသနည်း။
hashtags သည်လူကြိုက်များရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်မှာသင်၏ post ကိုသင်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိသေးသောပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်မှသင့်အားမြင်စေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးထားခြင်း၊ သင်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောပို့စ်များကိုပိုမိုရှာဖွေရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
Kelsey Jones၊ Salesforce Canada
Salesforce မှဤဥပမာသည် tools များစွာကိုအသုံးပြုသည်။
On ဆိုင်းဘုတ်၊ ထောက်ခံချက်မှာလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများစွာတွင်စာရင်းဇယားများ၊ စိတ်ဓါတ်များနှင့်ဆက်စပ်သော hashtag များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာလူမှုမီဒီယာအသစ်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်ရည်ညွှန်းနေသည့်ဆောင်းပါးနှင့်အလွန်သက်ဆိုင်သောလူကြိုက်အများဆုံးကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
On တွစ်တာ, သင်သည်ကျယ်ပြန့်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးအကွက်ထဲတွင်ဝေါဟာရတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ၊ ပြီးနောက်သင်ထိပ်ဆုံး (ဓါတ်ပုံများနှင့်တွစ်တာများ)၊ တိုက်ရိုက်၊ အကောင့်များ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအမျိုးမျိုးသော tabs များမှတဆင့်ရလဒ်များကိုကျဉ်းမြောင်းပေးနိုင်သည်။ ရှာဖွေမှုကိုတွစ်တာတစ်ခု (သို့) သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်အတွင်း၌သာစီစစ်နိုင်သည်။ ပထဝီအနေအထားအရသင်ပင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
On Instagram ကို, သင်ရုံ hashtag ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်နှင့် Instagram ကိုသူတို့ရဲ့ post ရေတွက်နှင့်အတူခေတ်ရေစီးကြောင်း tags များချက်ချင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။ အားလုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခိုင်လုံသောရေတွက်ရှိသည်သော hashtags ထည့်ပါ။
Twitter ကသင့်ရဲ့ update ကို share hash အပါအဝင်သင့်ရဲ့ update အားလုံးကို share လုပ်ထားပေမယ့် Instagram ကပုံတစ်ခုချင်းစီအတွက် hashtags ၁၁ ခုအထိ share လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာကျွန်တော့်အကြံဥာဏ်ပါ ခိုင်မာသော! သင်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များစွာနှင့်အတူသင်ရေးထားသော hashtag ကိုသုတေသနပြုသူတစ် ဦး ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယခုတွင် hashtag ကိုလေ့လာပြီးသင်ထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များကိုမကြာခဏရှာဖွေတွေ့ရှိနေသောအသုံးပြုသူကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မည်သည့်အချက်သည်သင့်အားနောက်တော်သို့လိုက်ရန်၊ အသိပညာတိုးပွားရန်၊ အကောင့်နှင့်ထိတွေ့ရန်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းပေးမည်ဟုသင်ထင်သနည်း။
သင်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များစွာနှင့်အတူသင်ရေးထားသော hashtag ကိုသုတေသနပြုသူတစ် ဦး ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယခုတွင် hashtag ကိုလေ့လာပြီးသင်ထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များကိုမကြာခဏရှာဖွေတွေ့ရှိနေသောအသုံးပြုသူကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မည်သည့်အချက်သည်သင့်အားနောက်တော်သို့လိုက်ရန်၊ အသိပညာတိုးပွားရန်၊ အကောင့်နှင့်ထိတွေ့ရန်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းပေးမည်ဟုသင်ထင်သနည်း။
Tags: အကောင်းဆုံး hashtagshashtags ကိုရွေးချယ်ပါhashtag သုတေသနဘယ္လိုinstagramkelsey Jonessalesforce ကနေဒါမင်္ဂလာပါတွစ်တာ
ဒီဇင်ဘာ 21, 2015 မှာ 7: 06 AM
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒေါက်ဂလပ်။ hashtag အသုံးပြုမှုနဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံကိုထည့်ချင်ပါတယ်
- Instagram ။ လူများကသူတို့ကို spam များနှင့်မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများအတွက်သူတို့ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်စိတ်ပျက်။ ဥပမာ #sea သည်ပင်လယ်နှင့်ဆက်စပ်သောပုံ (၄) ခုနှင့်အခြားအရာများကိုပင်လယ်မဟုတ်ဘဲပြသခဲ့သည်။
- တွစ်တာ။ အခြေအနေကပိုကောင်းပေမယ့်သိပ်မကောင်းဘူး။ ငါပြောချင်တာကသင့်လျော်သော hashtags ရှိသော valusble ပစ္စည်းသည်ဆူညံသံပျောက်သွားသည်။ ဒါ့ကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အခြားရုပ်ပုံများကိုသုံးရန်လိုသည်
21:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 55 တွင်
ဂရိတ်အမှတ်အဲလက်စ် သူတို့စော်ကားခံရတဲ့အခါလုံးဝစိတ်ပျက်စရာပါ။ သူတို့ကအနာဂတ်မှာ hashtag spammers တွေကိုဖမ်းနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့ account တွေကိုဖျက်ပစ်နိုင်တဲ့ report system တစ်ခုထပ်ထည့်လိမ့်မယ်။